Xoogag – Melange Apothecary
November 27, 2017 October 29, 2017 — admin
Midowga reer Yurub oo isku raacay qorshayaal Caalami ah oo Wadanka dibadiisa loogu tababarayo Ciidamada amaanka ee dowladda KMG Soomaaliya.
Wasiirada arimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa codkooda ku biiriyey qorshe ciidamada amaanka ee Soomaaliya loogu dhisayo xarun tababar, taasoo laga sameyn doono meel ka baxsan dalka Soomaaliya.
Warkan oo uu saxaafada siiyey madaxa siyaasada dibadda ee midowga Yurub Javier Solana oo intaa raaciyey in qorshahani uu quseeyo tababarka boliiska iyo shaqaalaha kale ee xaga amaanka ka shaqeeya kuwaa oo tababarka lagu siin doono dalka Jibuuti halkaa oo goor horeba Faransiisku uu uga waday howl noocan ah, waxa kale oo uu intaa ku daray Solana in ay suuro gal tahay in sidoo kale dalka Yugandha ciidamadaasi lagu tababaro.
“Guud ahaan fikradani waa mid si aad u wanaagsan loo qaatay” ayuu yiri Javier Solana oo suxufiyiinta kula hadlayey meel ka baxsan halka uu ka dhacaya kulan ay wasiirada gaashaandhiga ee midowga yurub ku lahaayeen maanta magaalada Gothenburg ee dalkan Sweden.
Madax u hadashay midowga yurub ayaa sheegay in ujeedadda ka dambeysa taageeradan caalamiga ah ee la siinayo hay’adaha amaanka ee soomaaliya ay tahay in la dhiso ciidamo boliis ah oo gaaraya toban kun oo askari iyo xoogag kale oo amaanka iyana gacan ka geysanaya oo gaaraya shan kun oo ruux.
Kulan bishaa April ee sanadkan ay deeq bixiyayaasha caalamiga aha ku yeesheen magaalada Brussels ayaa lagu yaboohay boqolaal milyan si gacan looga siiyo soomaaliya sidii ay dib ugu dhisi lahayd ciidamadeeda amaanka, ula dagaalami lahayd burcad badeeda isla markaana kala dambeyntii dib ugu soo celin lahayd kadib in ka badan labaatan sano oo dalku uu ku jiray fowdo.
Free free gallery gay piss and 1000 realm richards!
Safaarada soomaalida liibiya oo sheegtay in la sii deynayo soomaalida xirixran.